Ọchịchị abalị 4.8.27 na -abịa na nkwalite na nkwado dị iche iche maka alacritty na ụkwụ | Site na Linux
Mgbe ọnwa asatọ nke mmepe e kwupụtara ọkwa nke ụdị ọhụrụ ahụ site na njikwa faili njikwa "Ọchịchị etiti abalị 4.8.27" na nke e megoro ọtụtụ ndozi nke gụnyere mbelata oge mkpokọta, nkwado maka emulators alacritty na ụkwụ, rụzigharịa na sistemụ wijetị, ihe ngwọta maka adịghị ike na ihe ndị ọzọ.
Maka ndị na-amaghị Ọchịagha etiti abalị i kwesịrị ịma na nke a bụ ihe njikwa faili maka sistemụ Unix na ọ bụ Norton ọchịagha mmepụta oyiri nke na-arụ ọrụ na ọnọdụ ederede. Ihuenyo buru ibu nwere ogwe abụọ nke usoro faịlụ a gosipụtara.
A na-eji ya n'otu ụzọ yiri ngwa ndị ọzọ na-agba ọsọ na shea Unix ma ọ bụ interface iwu. Igodo cursor na-enye gị ohere ị pịgharịa na faịlụ ahụ, A na-eji igodo ntinye iji họrọ faịlụ na igodo ọrụ na-arụ ọrụ dịka nhichapụ, ịmegharị aha, idezi, i copomi faịlụ, wdg.
Ọ bụ ezie na Ọchịchị Midnight gụnyekwara nkwado òké iji kwado njikwa nke ngwa.
Ọchịagha etiti abalị nwere njirimara dika ike inyocha ọdịnaya nke faịlụ RPM, rụọ ọrụ na ụdị faịlụ dị iche iche dị ka a ga - asị na ha bụ ndekọ dị mfe.
Gụnyere onye njikwa mbufe FTP ma ọ bụ azụ protocol ahịa nakwa gụnyere onye editọ akpọrọ mcedit.
1 Ozi kachasị na Midnight Commander 4.8.27
1.1 Etu esi etinye Midnight Commander na Linux?
Ozi kachasị na Midnight Commander 4.8.27
Na ụdị ọhụụ nke Ọchịchị abalị 4.8.27 enweghị nsogbu CVE-2021-36370 nke achọpụtara na ụdị nke gara aga na modulu VFS nwere nkwado SFTP metụtara enweghị nkwenye mkpịsị aka mkpịsị ugodi ndị ọbịa na n'ihi nke a, onye ọrụ na -ejikọ na sava ahụ na -enweghị ike inyocha eziokwu ya.
Maka akụkụ nke ihe ọhụrụ a na -egosi, anyị nwere ike ịhụ nke ahụ "Soro njikọ ihe atụ" nhọrọ Soro symlinks na mkparịta ụka "Chọta faịlụ" na ahazigharịrị wijetị. na steeti WST_VISIBLE etinyere igosi na zoo wijetị,
Ọzọkwa, etinyerela ụdịdị kacha nta nke ihe ndị achọrọ maka nrụpụta: Autoconf 2.64, Automake 1.12, Gettext 0.18.2 na libssh2 1.2.8 na oge mkpokọta adịla mkpụmkpụ mgbe mgbanwe nke ụdị ahụ gasịrị.
Anyị nwekwara ike chọpụta na VFS extfs modul gbakwunyere nkwado maka unrar 6 na ndị ọrụ 7z na-arụ ọrụ, agbakwunyere ihe nrịba ama dị ala na ihe atụ ụkwụ, yana mgbakwunye maka usoro fb2 e-book tinyekwara na mc.ext.
Nke mgbanwe ndị ọzọ na-staked nke ọhụrụ a version:
Agbakwunyere faịlụ nhazi iche maka zsh ~ / .local / share / mc / .zshrc.
Ebufela parser ndepụta faịlụ lftp na ftpfs.
Onye nchịkọta akụkọ arụnyere na-enye nkọwapụta syntax maka isi okwu Verilog na SystemVerilog, edemede mmeghe, na usoro JSON. Syntax emelitere na -egosipụta edemede maka Python
Ogwe ndị ahụ na -egosipụta faịlụ c ++ na h ++ dị ka ederede isi mmalite na faịlụ JSON dị ka akwụkwọ. Ext.d na -eji ike mediainfo gosipụta ozi gbasara faịlụ mgbasa ozi dị iche iche.
Finalmente ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịmatakwu banyere ya Banyere ntọhapụ nke nsụgharị ọhụrụ a, ị nwere ike ịlele nkọwa dị na ọkwa mbụ. Njikọ bụ nke a.
Etu esi etinye Midnight Commander na Linux?
Maka ndị nwere mmasị ịwụnye Midnight Commander na sistemụ ha, ha nwere ike ịme ya site na isoro ntuziaka anyị na-ekerịta n'okpuru.
Iji wụnye ụdị ọhụụ, otu ụzọ bụ site na ikpokọta koodu isi. Este ha nwere ike inweta ya site na njikọ na-esonụ.
Ọ bụ ezie na maka ndị chọrọ iji ngwugwu a chịkọtara, ha nwere ike iwunye ụdị ọhụụ ahụ site na iji kọmputa ede iwu ndị a, dabere na nkesa Linux ha na-eji.
Ndi ji ya Debian, Ubuntu ma obu ihe obula ozo nke a. Na ọnụ ha ga-pịnye ihe ndị a:
Naanị maka Ubuntu na nkwekọrịta, ga-ebiriri ebe obibi nke uwa:
E wụnye ngwa na:
sudo apt wụnye mc
Maka ndị ji ya Arch Linux ma ọ bụ ụfọdụ ihe sitere na ya:
N'ihe banyere Fedora, RHEL, CentOS ma ọ bụ nkwekọrịta:
sudo dnf wụnye mc
N'ikpeazụ, n'ihi na OpenSUSE:
sudo zypper na mc
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Ọchịchị abalị 4.8.27 na -abịa na nkwalite na nkwado dị iche iche maka alacritty na ụkwụ